07/06/2018 - Page 3 sur 5 -
Sendikà sy Rezervista : Misisika mafy mitady seza anaty governemanta
07/06/2018 admintriatra 0
Vantany vao voatendry ny praiminisitra vaovao, Ntsay Christian, dia mipelipelika etsy sy eroa amin’ny alalan’ny fanaovana fanambarana avokoa ireo milaza ho sendikà sy rezervista, ary ireo mpitantana ireo Oniversite eto Madagasikara amin’ny fitadiavan-tseza. Saika nanao …Tohiny
Praiminisitra vaovao : Tokony hibanjina ny sosialim-bahoaka
Nitondra ny fanehoan-keviny mahakasika ny praiminisitra vaovao Ntsay Christian ny MSI na ny “Majorité silencieuse”, izay olom-pirenena maro an’isa mivondrona manohitra ny fiakaran’ny vidim-piainana. Nanambara ny filoha mpitarika ny fikambanana, Razafindrambelo Lalaina tamin’izany fa hantenaina …Tohiny
Fanafihana masera tao Ambano : Efa-dahy no efa voasambotra
Natolotra ny fitsarana omaly alarobia ny efa-dahy voarohirohy tamina fanafina ny tobin’ny masera teny Ambano, ary naiditra am-ponja avy hatrany. Raha tsiahivina fohy, ny fiandohan’ny volana Mey lasa teo no nitrangana fanafihana ny tobin’ny masera …Tohiny
ANTSOSO BETAFO : Jiolahy 30 lahy mirongo fiadiana nanafika fivarotana
Saika ho isan’andro no handrenesana fanafihana mitam-piadiana ireo kaomina manodidina ny distrikan’i Betafo. Mitondra faisana hatrany ireo mponina vokatr’izany, tsy ireo manana omby fa hatramin’ny mpivarotra, na mpamongady izany, na mpaninjara dia mahita faisana avokoa. …Tohiny
Notontosaina ny alin’ny faha-17 ny volana oktobra lasa teo, tao amin’ ny masoivohon’i Madagasikara tao Roma ny lanonana fanolorana ny laharam-boninahitra Honoris Causa amin’ny siansa politika ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina. Ny oniversiten’i Milan no nanolotra ...Tohiny
Lalana momba ny Fampihavanam-pirenena:Handalo eny amin’ny Antenimieran-doholona